Ungala njani konke ukubhaliswa kwi-MTS? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ukuphelisa njani konke ukubhaliswa kwi-MTS?
Inkonzo yam; inkonzo yam; isuka kwi-MTS Yenza ukuba kube lula ukufumana ulwazi oluluncedo nolonwabisayo ngohlobo lwemirhumo ye-sms.
ukuba Shicilela kubhaliso lonke okanye ufumanise ngenombolo yabo, kufuneka ucofe isicelo esilula se-USSD * 152 # kwaye ucofe umnxeba. Kwimenyu evela, khetha into yesibini. Uya kuya kulawulo lokubhalisa. Apha unokukhetha uzikhuphele kuzo.
Unokukhupha ubhalise nge-Qu; akhawunti yam; kwiwebhusayithi yenkampani ye-MTS.
Yala iinkonzo ezihlawulelwayo ngezi ndlela zilandelayo:
1. Ungalufumana ulwazi malunga nokubhaliselwa okwangoku kweMTS kwaye ungabhalisi ngokutsalela umnxeba kwinombolo yasimahla * 152 * 2 #
2. Kwakhona, i-MTS inenkonzo ekhethekileyo ebizwa ngokuba yi- "quot; ban ban umxholo"; ekuthintele kumalungelo akho okubhalisela entweni, oko kukuthi, awuyi kuba nakho ukufumana nayiphi na into ebhalisiweyo. Kwi-Intanethi, ukhuseleko lwakho kubhaliso oluhlawulwayo (iisayithi ezibuza amanani) lenyuswa ukuya kwi-80%.
Unokwenza le nkonzo isebenze kwi-MTS ngekhonkco (iakhawunti ye-MTS yobuqu).
Ndinqwenela ukuba uqaphele ngakumbi!
Kukho iindlela ezininzi, kufuneka ukhethe efanelekileyo. Unokuqhawula iakhawunti yakho yobuqu kwiwebhusayithi ye-MTS, unokucela umphathi ukuba akhuphele ngaphandle, okanye ucofe iqhosha lokutsala umnxeba kwi-152 # iqhosha, uye kwimenyu yesibini kwaye ujonge zonke iinkonzo ezihlangeneyo, uzikhuphele kwenye yazo.
Unokubhalisela konke ukubhaliswa kwe-MTS kwiakhawunti yakho. Ukuba awukakwazi ukufikelela kwiakhawunti yakho ye-MTS, kulula ukuyifumana, kufuneka nje ube neselfowuni nekhadi le-MTS SIM ngesandla. Emva kokungena kwiakhawunti yakho, jonga kwimenyu esekunene. Kule menyu, khetha into yam yokuBhaliselwa, emva koko ucofe i-Disense Yonke into.
Okunye Indlela yokubhalisela ubhaliso kuyo yonke imirhumo ye-MTS Tsalela umnxeba ku-152 # kwifowuni yakho, emva koko cinezela 2 (iinkonzo ezihlawulelweyo), emva koko kwakhona 2 (okubhaliselwe ukuzonwabisa), 2 kwakhona (jonga iinkonzo zakho) kwaye ekugqibeleni ucinezele u-3 (ungazikhupheli kuzo zonke iinkonzo).
Rhoqo, ii-MTS zibeka imirhumo yethu yasimahla, eminye yayo ihlawulwe. Xa ndibona ukuba kwifowuni yam, ngokungenakuchazwa, imali iqala ukunyamalala yonke imihla, ndiye kwangoko ndaya kwifowuni yeselula ecela ukukhupha yonke imirhumo ehlawulelwayo. Bayacelwa ukuba benze oku ngokukhawuleza.
Ukuba awunethuba lokundwendwela i-MTS ifowuni ye-salon, ke tsalela le nombolo 8 800 250 08 90 kwaye ingcali iya kusombulula zonke iingxaki zakho.
Unakho nokutsalela umnxeba ku * 111 * 919 # kwifowuni kwaye umnxeba. Apha uya kuxelelwa ngokwezigaba ukuba zeziphi izitshixo ekufuneka ucofe ukwanelisa isicelo sakho.
Ukucima ubhaliso oluhlawulweyo, ucofe * 111 * 919 # kwifowuni yakho kwaye ulandele izikhokelo. Unokusebenzisa umncedisi we-Intanethi okanye unxibelelane nengcali kwinombolo engahlawulelwayo 8 800 250 08 90.
Apha ndinencwadana enemiyalelo efanelekileyo yabanini bamakhadi eSIM ukusuka kwi-MTS.
Ke, ukuze ubhalise kwaye urhoxise, kufuneka uchwethe umthetho olula, kwaye oku kuchwethezwa nge-asterisk 152 asterisk2 latiti kunye neqhosha lokufowuna.
Umsebenzi olunge kakhulu kumaqela, oku kukubona iindleko ze isenzo ezintlanu zokugqibela zomnini wekhadi leSIM. Ukwenza oku, ucofa ilitha ye-asterisk 152 kunye neqhosha lokufowuna.
Kwaye inokuthi ifike ilungele ukufumana inombolo yam, okanye endaweni yoko, inombolo yakho ye-asterisk 11 inkwenkwezi ye-0887 kunye neqhosha lokufowuna.
Ndisebenzisa i-Tele2, irhafu ebiza kakhulu, kodwa umqhubi akahlali ebonelela ngeenkonzo kuyo yonke indawo, kwaye udadewethu usebenzisa iMTS, ke sinayo le ncwadana ngawo onke amaqela.
Ungasusa kubhaliso kuyo yonke imirhumo usebenzisa umncedisi we-Intanethi, kuyakufuneka ungene kwiwebhusayithi esemthethweni, uluhlu lwamaxabiso kunye neenkonzo ngasekhohlo, kunye neenkonzo zokukhubazeka. Ungatsalela umnxeba umnxeba kwinombolo emfutshane engu-0890, udinga idatha yencwadana yokundwendwela.
Eyona ndlela ilula yokucima konke ukubhalisela ukuya kwi-MTS kukutsala umnxeba umnxeba ku-8 800 250 08 90 kwaye uthi awusafuni ukusebenzisa konke ukubhaliswa okuqhagamshelwe.
Ungaya kwi-quote; akhawunti yobuqu; kwiwebhusayithi yeMTS kwaye kunqumamisa yonke imirhumo ekhoyo.
Ndihlala ndenza oku: yiya kwi-quot; thebhu; Nalu lonke uluhlu lweenkonzo ezinikezwe yi-MTS. Phantse kwinkonzo nganye ehlawulelwayo iindleko zibonisiwe kwaye kukho iqhosha elithi;; khubaza i-quot ;. Inkonzo yenziwe yasebenza ngaphakathi kwiiyure ezingama-24.
Ukukhupha ubhaliso kwi-MTS, ungahamba ngeendlela ezininzi
Ukufumana uluhlu lwezinto ozibhalisileyo onazo kwaye uzinqabe, ungasebenzisa inkonzo qu; Ukulawulwa kweendleko ;. Ukwenza oku, chwetheza * 152 # ucofe iqhosha umnxebaemva koko ukhethe umhlathi 2 (jonga ikhathalogu yemirhumo), emva koko ukwala ubhaliso.
Tsalela umnxibelelanisi we-MTS. Jonga kumnikezeli wakho nawuphi na umrhumo kwaye ubacele ukuba bawucime.
Thatha ithuba uMncedisi we-Intanethi. Sebenzisa le nkonzo, ngokwakho unokukhulula ubhaliso kwaye ulawule iinkonzo ze-MTS.
Sebenzisa iakhawunti yakho yobuqu kwiwebhusayithi yeMTS.
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,300.